Ungayisusa kanjani imibhalo yakamuva kubumbano | Kusuka kuLinux
Ungayisusa kanjani imibhalo yakamuva kubumbano
Izolo umngani ungishayele ucingo nginalombuzo olandelayo: Ngingayiqeda kanjani i- Imibhalo Yamuva en Unity? Njengoba ngingeyena umsebenzisi we Ubuntu futhi ngaqala ukubheka futhi engakuthola kwaba okulandelayo.
Lezi yizinto engingaziqondi.Kungenzeka kanjani ukuthi into eyisisekelo njengaleyo ingafakwanga ngokwakhona? Mhlawumbe enye inketho kungaba ukukhubaza zeitgeist, kodwa besizobe senza okufanayo naku KDE lapho kungasebenzi I-Nepomuk+Akonadi nazo zonke izinto zedeskithophu ye-semantic.
Manje sekusele ukuthi othile enze isiqalisi sokuthuthukisa le nqubo ..
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso » Ungayisusa kanjani imibhalo yakamuva kubumbano
Ngiyavuma ukuthi okuthile okuyisisekelo kangaka kufanele kube khona ngokuzenzakalela, ku-gnome2 kunjalo, naku-LXDE nakho. Lesi ngesinye sezizathu eziningi zokungasebenzisi i-Unity.
Ku-Xfce futhi. Kuyinto eyisisekelo njengoba ngishilo. Ugqokeni ke?
Nesibindi sisebenzisa iWindows ... "ubuhle buntombi" hehe.
Isibindi sibhaxabule ubuso bakho ngodonga ngokusebenzisa iWinbug, ama-Taliban ayale.
Leyo khompyutha inginikeza imbongolo yokufaka i-Arch futhi ngenkathi ikhona, ake sibheke ukuthi ngabe isihlabathi sicabanga ukuthi asihambelani noma yini ngesithombe engimthumele sona
uma ikhona ngokuzenzakalela. Uma kuthebhu ethi 'Dash Home' ubhala 'ubumfihlo' iwindi livela lapho ungasusa khona wonke "umlando" wobumbano, futhi ungasebenzi nenketho ethi "Khumbula Umsebenzi"
Ngiyabonga, ngaso sonke isikhathi lapho ngijwayela okuningi ku-Ubuntu futhi ngiphuthelwa iWindows kancane
Ngiyabonga, bekulula kakhulu, kungisebenzele kakhulu 🙂
Ngibonga kakhulu!! Ngichithe isikhathi eside ngiyifuna futhi ekugcineni kwaba lula kakhulu.
Ngiyabonga iqiniso ngimusha ku-linux futhi bengingazi ukuthi ngingakhubaza kanjani leyo ndlela ngiyabonga.
Njengokuthi cha. Kumele uye ku-SYSTEM CONFIGURATION, uma usukhona lapho kufanele ukhethe i-PRIVACY futhi lapho kufanele ususe umlando futhi yilokho kuphela.
Engingakwazi ukuthi uma windows isebenzisa itafula lekhodi le-ASCII ukusebenza nezinhlamvu ezikhethekile, yiliphi itafula elisebenzisa Ubuntu?
Lezi yizinto engingaziqondi.Kungenzeka kanjani ukuthi into eyisisekelo njengaleyo ingafakwanga ngokwakhona?
Lokho kungenye yezinto ezithathe iso lami selokhu ngakuzama ngaphambi kwehlobo. Futhi kusukela lapho akusekho inketho elula. KuGnome 3 Shell kuyafana. Ekugcineni ngakhetha ukungakhiqizi "okwakamuva".
Kungwenela ukususa i- ~ / .local / share / recently-used.xbel
ukuze ingaveli futhi singenza iqhinga lokwenza ifolda eqanjwe ngokufanayo ezovimbela ukwenziwa kwefayela elisha
Kukhona nemenenja yeZeitgeist, okuyinjini entsha yale misebenzi yokwenza izinkomba: Umphathi Wokungena Komsebenzi noma Ubumfihlo beZeitgeist Emhlabeni Wonke
Enye inketho ukudala iskripthi:
rm $ IKHAYA / .local / share / zeitgeist / activity.sqlite
zeitgeist-daemon - indawo
Kumenyu ethi «file - save as» silibiza ngegama «Dele_history» futhi siligcina kufolda yomuntu siqu.
Manje sesiyinika izimvume, ngokuchofoza kwesokudla kufayela naku- "properties - permissions" sisebenzisa ibhokisi elithi "Vumela ukusebenzisa ifayili njengohlelo"
I-Activity Log Manager kimi isebenza uma izwakala sengathi .... yize kubonakala sengathi uma beqhubeka nokuyithuthukisa kungaba yindlela enhle. Engxenyeni yeqembu leGnome, ngicabanga ukuthi kukhona iphephabhuku le-gnome-activity-journal. Eyokuqala yenzelwe ukunakekela ubumfihlo kanti eyesibili, ukuphatha umsebenzi wakho phambi kwe-PC.
I-Zeitgeist ibonakala inhle kakhulu, ngoba iqopha konke… .. Kepha uma kukhulunywa ngokuyiphatha nokuphoqa ukuthi wenze izinto…. ayikho indlela ecacile nenethezekile. Indaba yesikhathi (eside kakhulu).
Siyabonga ngomnikelo, ngicabanga ukuthi ngaphezu koyedwa wethu sizibuze lo mbuzo.
Ukungabaza, umyalo wokuqala ususa ifayela: "Umsebenzi.sqlite", ingabe leli fayela lenziwa ngokuzenzakalela njengohlobo lwe-log? Impela umyalo wenzani: "I-Zeitgeist-daemon - indawo" noma yenzelwe ini?
i-zeitgeist-daemon - indawo ebuyisela kabusha i-daemon ye-zeitgeist, iqala kabusha futhi
Ukusho ukuthi akuzona izindlela eziyi-100% eziphumelelayo…. Kwesinye isikhathi bebengisebenzela kwesinye isikhathi bengangisebenzeli. Ekugcineni ngikhethe inketho yokuqala, kuze kube Umphathi Wokungena Komsebenzi noma uhlelo olufanayo selukhule ngokwengeziwe.
omunye umsebenzi okhohliwe umaki ...
Hhayi uMark kuphela. EGnome Shell ayikho…. Masingakhohlwa ukuthi sisesikhathini soguquko futhi izinto zishoda.
Ukunikeza esinye isibonelo. Ku-Gnome Shell (hhayi uma unobumbano futhi) inkomba / yokuhambisa inkomba yokuqhubeka ingekho, lapho ukopisha noma uhambisa amafayela usuka endaweni eyodwa uye kwenye. Kukhona iwindi elikhombisa lokhu, kepha uma unezinto ezimbalwa ezivulekile kulula ukukulahla noma ucabange ukuthi ikhophi seliqedile. Kufanele kube nesikhombi sohlobo lwesaziso kuphaneli. Kepha ayikho. Ngicabanga ukufaka okuthile…. kepha angikakutholi okwamanje.
Inkinga nge-zeitgeist eza ne-Gnome 3 futhi namanje "iluhlaza" ngandlela thile, kepha ungakha iskripthi ukusula umlando wayo futhi akudingeki ukwenze ngesandla kusuka ku-terminal.
Kepha kunenketho engcono ebizwa ngokuthi i-Activity Log Manager. Kuyinto isicelo esikuvumela ukuthi ulawule i-Zeitgeist ukuze ukwazi ukusula umlando wayo ngezikhathi ezithile futhi wakhe uhlu lwamafolda amnyama ongafuni ukuba yingxenye yedathabheyisi yeZeitgeist.
Hawu, ngicabanga ukuthi uJosé ubesevele ekushilo lokho. Lokho kwenzeka kimi ngokungafundi wonke amazwana ngaphambili. Kungakuhle uma lawa mazwana ami amabili esuswa ukugwema ukudilizwa kwento ebivele ishiwo.
Ku-mint 12 inkinga efanayo… akukho lutho oluphelele!
Ngicabanga ukuthi ukususa umlando kulula kakhulu, noma ngingemusha kakhulu ukusho, angikaze ngingene kulokhu okuningi, ngimane ngifake, ngibhekabheke bese ngizama ukwenza ezinye izinto ezingisizayo.
ukususa umlando we-ubuntu 12.04 vele wenze okulandelayo:
Ukucushwa kwesistimu / Ubumfihlo / .. Ngakwesokudla khetha konke bese uqhafaza ukususa umlando ne-voila ..
Ngalokhu usula yonke into futhi ungakhomba nezinto ezithile ozithandayo ukuze ikwazi ukugcina noma isule kuphela lapho uphuma.
Imininingwane enhle kakhulu i-VICMAS, ngikhumbule ukuthi kukhona engikubonile, manje sengiyazi kanjani! ngiyabonga
Ungakhetha futhi "Susa umlando" wehora lokugcina, izolo, ngesonto eledlule noma ngokuthuthukile (noma yisiphi isikhathi).
Ngiyabonga VICMAS! Isixazululo esihle kakhulu.
IVicmas, usilalisa sonke, ngiguqula indlela yami yokubona izinto ku-Unity (okungukuthi, yokuluma ngayo yonke into), NGIYABONGA ...
Ku-Linux Mint kukhona, ngokwazi kwami, amafayela ama-2 lapho kugcinwa khona umlando wamadokhumenti asanda kuvulwa, izinto noma amafayela. Vele ususe noma ususe ukuze usule umlando.
1) Kusuka ku-OpenOffice.org: /home/username/.openoffice.org/3/user/registry/data/org/openoffice/Office/Histories.xcu (ifolda ye-offenoffice.org ifihliwe - inechashazi phambi it-).
2) Kusuka kwezinye izinhlelo noma izinhlelo zokusebenza (i-gedit, eog -Eye ye-GNOME-, evince -Document Viewer-, Totem,…): /home/username/.recently-used.xbel (ifayela okukhulunywa ngalo lifihliwe) .
Ilula, iza nomphathi womlando, iya enjini yokusesha yobunye bese wenza ingxenye ethi «ubumfihlo» futhi lapho ungenza khona ngokwezifiso wonke umlando nobumfihlo bawo. kuchazwe kangcono lapha:http://www.youtube.com/watch?v=ucSJt-e5PFU
Hhayi-ke uma ngibona ukuthi bekulula kakhulu ... .ngiyabonga kungisize kakhulu bengicabanga ukuthi ngeke, lokho ukungabi nalwazi olufanele kukwenza uzibone usenkingeni… .ngiyabonga nemikhonzo.
Uwuguqula kanjani lowo myalo ukuze kuvele imibhalo yakamuva?
inkungu emnyama kusho
Uwuguqula kanjani lowo myalo ukuze imibhalo yakamuva ivele futhi?
Phendula kunkungu emnyama
I-BlueProximity noma ukuthi ungakhiya kanjani i-PC yakho lapho uhamba nefoni yakho ephathekayo